Resadresaka nifanaovana tamin'i Richard Quest an'ny CNN
Home » Interviews » Resadresaka nifanaovana tamin'i Richard Quest an'ny CNN
Ny fampielezam-peo lehibe iraisam-pirenena Richard Quest dia iray amin'ireo endrika malaza indrindra amin'ny ekipa CNN. Quest, izay nanelanelana ny adihevitra avo lenta momba ny fizahan-tany sy ny SDG an'ny Fihaonambe faha-22 an'ny UNWTO, dia nizara ny heviny momba ny hoavin'ity sehatra ity.
F - Nanao tatitra momba ny sehatry ny fizahan-tany ianao nandritra ny folo taona lasa. Ahoana ny fahitanao ny fivoaran'ny sehatra amin'ny taona ho avy?
A - Tokony hotadidina ny olona fa ny fizahantany dia iray amin'ireo sehatra mandroso haingana indrindra eran'izao tontolo izao; ny isan-jaton'ny harin-karena faobe dia 10% ary maneho asa 1 amin'ny 10 izy io. Tsy misy isalasalana ny dikany. Ny fanontaniana dia ny fomba fitomboana amin'ny fomba maharitra. Mety mahazo tombony daholo ve ny rehetra sa miafara amin'ny hazakazaka hatrany ambany? Hatao fanamby lehibe izany: ny famoronana indostrian'ny fizahantany misy dikany, maharitra ary mahasoa.
Q - UNWTO dia miara-miasa akaiky amin'ny haino aman-jery ary mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahafahan'ny mpanao gazety manao tatitra momba ny fizahantany. Inona ny fahitanao ny andraikitry ny vondrom-baovao amin'ny fanohanana ny fizahan-tany maharitra?
A - Ny andraikitry ny haino aman-jery dia tsy ny fampiroboroboana ny fomba fijery iray na hafa. Ny fizahan-tany maharitra dia politika efa novolavolaina teo amin'ny sehatry ny Firenena Mikambana ary ny marimarina kokoa ao amin'ny World Tourism Organization, ao anatin'ny SDGs.
Noho izany, tsy maintsy manao tatitra momba izany isika, momba ny fandrosoana vita ary raha misy dikany na mivoaka ny lalamby. Heveriko fa ny zavatra iray mety hanjary variana amin'ny haino aman-jery dia ny fanontaniana raha toa ka mamorona ity rafitra ity isika, raha tratra ny tanjona, raha toa ka manao ny mety na ny tsy mety ny UNWTO… Tsy anjarantsika izany. Ny asanay dia ny mitatitra ny zava-mitranga, ny fomba fampiharana azy ary ny fomba fanaraha-maso azy, ary ny fanondroana ny fahombiazana sy ireo toe-javatra izay ilana asa bebe kokoa. Saingy tsy eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny fandaharam-potoanan'ny olon-kafa isika. Fahadisoana lehibe ho an'ny olona ny mino fa izany no andraikitry ny haino aman-jery.
F - Iray amin'ny sehatry ny asan'ny UNWTO ny fanohanana ny fifandraisan'ny mpitantana fizahan-tany amin'ny haino aman-jery. Inona ny torohevitrao amin'ny toeran-kaleha hanatsarana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny haino aman-jery?
A - Tsy afaka miditra amin'ny haino aman-jery fotsiny ianao rehefa mandeha tsara ny raharaha. Tsy afaka mifanerasera amin'ny olona toa ahy ianao ary miteny hoe: “Manana tantara tsara ho anao aho, avia ary” na “maninona ianao no tsy tonga manandratra an'ity?” Ny tantara tsara dia tantara tsara, fa ny tena fifandraisana dia ireo izay natsangana nandritra ny fotoana lavalava, izay ahafahan'ny haino aman-jery mahatakatra ny tsara mitranga any amin'ny firenenao, ny fahasahiranana misy ary ny zavatra atao hamahana ireo .
Ny minisitry ny fizahantany izay mifampiresaka matetika amin'ny haino aman-jery milaza fa "izao no ataontsika momba ny fizahan-tany maharitra", "ity no ataontsika momba ny asa fampihorohoroana", "ity no ataontsika momba ny filaminana" na "by the way , manana olana amin'ny tsy fahaizan'ny toetr'andro na ny fihoaram-pefy eo amoron'ny ranomasina isika, izao no ataonay ”… Ireo no minisitra izay hihaino ny sofiko rehefa manana tantara tsara na tantara sarotra iray izy ireo.
Ka ny torohevitro ho an'ny minisitra fizahan-tany na ny biraon'ny fizahantany dia ny tsy ahafahana mamono ny fifandraisana media. Tsy mandeha toy izany. Ho may ianao. Ny fifandraisana maharitra amin'ny haino aman-jery dia manangana tetezana izay hiampitan'ny roa tonta amin'ny ho avy.